को हुन जस्पुरे बैद्य जस्ले भाचिएको हात, खुट्टा सजिलै निको पार्छन् ? ( भिडियो सहित ) - Tulsipur Online
को हुन जस्पुरे बैद्य जस्ले भाचिएको हात, खुट्टा सजिलै निको पार्छन् ? ( भिडियो सहित )
Posted by Admin | ११ चैत्र २०७५, सोमबार ११:२२ |
तुलसीपुर – नगरपालिका साविकको उरहरी- जसपुरमा बस्ने ‘जसपुरे बैद्य’ टेकबहादुर डाँगी संग उहाँले गर्दै आएको उपचारकोे वारेमा हाम्रा सहकर्मी बालाराम खडकाले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट……………
११ चैत / रुखबाट लडेर हड्डी भांचियो, वा घरमै भित्रबाहिर गर्दा हात खुट्टा मर्कियो, वा दुर्घटनामा परेर हाड जोर्निको समस्या देखियो’, यस्तो अवस्थामा जिल्लामा हाड जोर्निको जडिबुटि खुवाएर तथा काप्रो बाध्ने गरेर पनि सन्चो गराउन नाम चलेको नाम हो जसपुरे बैद्य ।
अधिकांशले उनलाइ जसपुरे बैद्य भनेर चिन्ने गरेको भएपनि तुलसीपुर– नगरपालिका साविकको उरहरी ४ जसपुरमा बस्ने उनको खास नाम भने टेकबहादुर डाँगी हो ।
हाड जोर्निको दिर्घकालिन समस्या भएका व्याक्तिहरु पश्चिम महांकालि तथा पुर्व विराटनगरदेखि पनि आउने गरेको उनी बताउंछन् ।
दुर्घटनामा परेर शरीरमा बाहिरी घाउ समेत लागेको अवस्थामा भने उनले आफुले उपचार गर्न नसक्ने भन्दै विरामीलाइ सहजै रुपमा अन्यत्र सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जान सल्लाह दिन्छन् ।
‘एक्सरे हेरेपछि मात्रै मैले सक्ने नसक्ने भन्ने विषयमा विरामीलाइ सल्लाह दिन्छु, सहज अवस्थामा काप्रो बांधेर जडिबुटि खुवाएर जोडिने अवस्थामा मात्रै मैले उपचार गर्न सुरु गर्छु, अन्यथा अन्यत्र जान सल्लाह दिन्छु’—हाडजोर्निका बैद्य डांगीले भने ।
उनले फुटेको हड्डिीलाइ यथास्थानमा ल्याएपछि जोडिने अवस्थामा मात्रै विरामीको उपचार थाल्ने गरेको पनि बताए । त्यसो त उनले कुनै पनि उपचारको मुल्य भने तोकेका छैनन् । आफ्नो इच्छा अनुसार रकम दिए आफुलाइ मान्य हुने उनले बताए ।
‘भांचिएको खण्डमा पहिलो चरणमा दप्तिको आधार बनाइ व्याण्डेज गर्ने र विरामीलाइ हाड जोडिने जडिबुडि तोकिएको मात्रामा दिने गरेको छुं, त्यसले प्राय सयमा नव्वे विरामीको हाड जोडिएको छ, शुल्क चांहि मैले कहिल्लै तोकिन’—डांगीले भने ।
उनले भांचिएको हाड व्याण्डेज गरेको अवस्थामा विरामीहरुले आफ्नो आर्थिक अवस्था हेरेर हजार रुपैया सम्म पनि दिने गरेको बताए, तर त्यो तोकिएको मोल भने होइन । कतिपयलाइ उनले निशुल्क तथा न्युन पारीश्रमिकमा समेत उपचार गर्ने गरेको बताए ।
तर उनलाइ अघिल्लो केहि बर्ष अघि विनोद थापाले नसकेका विरामी पनि जसपुरमा आउंछन भनेर दाङको एउटा पनिकाले छापेको समाचारले भने धेरै खल्लो बनायो ।
त्यसै प्रशंग जोड्दै उनले भने—‘त्यस्तो खवर तपाइको पत्रिकामा नलेखिदिनुहोलाइ है, मैले नसक्ने विरामीलाइ जहिल्लै पनि नेपालगन्ज विनोद थापा र गोपाल सागर डिसि कहां जान सल्लाह दिन्छु, डा. विनोद थापा र डा. गोपाल सागर डिसि जस्तो विषेशज्ञ म कहिल्लै हुन सक्दैन ।
’ उनले आफुले गर्न सक्ने उपचारमा मात्रै हातहाल्ने बताउंदै आफुले नसक्नेगरी भांचिएका हाडजोर्निको उपचार गर्न अन्यत्र पठाउने गरेको समेत स्पष्ट पारे ।
उनलाई गाउका वैध्यवा भन्नेर पनि परिचत भएका छन । आवस्यक परेको र अशक्त विरामी भएको अवस्थामा उनी तुलीपुर नगरपालिकामा समेत उपचार गर्न आउन भ्याउंछन् । तर, उनले भने, अशक्त, अपांग, बृद्धबृद्धा लगायतका विरामीकालागी मात्रै घर छाडेर उपचार गर्न जाने गरेको छु ।’
त्यसमा उनले अतिरिक्त शुल्क नलिने पनि बताए । कुनै दुर्घटना होस वा भब्यतब्य घटननामा हात खुटा भाचीएको देखी समान्य सुनियका आडजोडिनिका विरामीहरु उरहरीको जसपुरमा आउने गरेका छन । दाङमात्र हैन नेपालका विभीन्न क्षेत्रवाट हाडर्जोडनीको समस्या भएका विरामीहरु उरहरी ४ जसपुरमा रहेका डाँगी कहा आउने गरेका छन ।
सामान्य मर्केको देखी हात खुटा भाचीएकाहरु वैद्यवा काहा आउने गरेका छन । सामान्य शुल्क तथा जडिवुटिवाट उनले हाडर्जोडनी भाचीएकाहरुलाई निको पार्ने गरेका छन् । सामान्य लेख पढ गर्ने जानेका डाँगीले हात खुटा भाचीएमा काव्रीलगायर जडिवुटिवाट विरामीहरुलाई सन्चो वनाउने गरेको वताउछन् ।
करिव ६ दर्शक नागेका डाँगीले १७ वर्षको उमेर देखी हाडर्जोडनि सम्वन्धी अनुभव वटुलेको वताए । डाँगीले भने –‘मैले कुनै ठुलो तालिम लिएको छैन्न यो काम १७ वर्षको उमेरदेखी काम गदै आएको छु ।’त्यसै गरी वैद्य वाले पहाडवाट हाल जडिवुटि ल्यायर औषधी दिने गरेको वताए ।
उनले औषधिपनि १० दिनको लागी दिने र ७ दिनमा फेरी फलोअपकालागी विरामी वोलाउने गरेको वताए । वैद्यले २ जना जडिवुटिल्याउने मानिस समेत राखेको वताए । उनले जडिवुटि जंगलमा हाल यही पाइने गरेको वताए । वैद्य डाँगीले भने –‘मलाई यो जडिवुटि सपनामा भगवानले दिएका हुन यही वुटिले हाल विरामी सन्चो भएको छ ।’
वैद्यलाई देखाउन उनकै घरमा दैनीक एकदर्जन वढी विरामीहरु आउने गरेका छन । उपचारका लागी वैद्य काहा हाडजोडिनि विशेषज्ञले समेत विरामी पठाउने गरेका छन । ‘मैले यहा वाट विरामी आउछन भन्ने भन्दापनि तपाई हरुले सोधनुहोस मैले आफनो वारेमा आफै भन्न मिल्दैन’ डाँगीले भने ।
त्यसै गरी धेरै सिरीयस केस आएमा नेपालगंञ्ज समेत पठाउने गरेको उनले वताए । त्यसै गरी उनले उपचार गरेको पैसापनि तोकेर लिने नगरेको वताए । विरामीको खुसिले जति दिन्छ त्यतीनै लिने गरेको छु । कोही मैसानहुनेलाई निसुल्क पनि उपचार गरेर पठाउने गरेको वैध्य भनाई छ ।
त्यसै गरी डाँगीले आफुले उपचार गरेको विरामी पूर्ण रुपमा सन्चो हुने भन्दै कहिले काही नराम्रो हुनेहोकि भन्ने चिन्ता लाग्ने गरेका उनको भनाई छ । उनले उपचारका लागी घरमा पनि जाने गरेको वताएका छन ।
वैध्य डाँगीले भने–‘सवैको घरमा जान सम्भव छैन केही वुढा असक्तले वोलाएमा जाने गरेको छु ।’ उनले हाल हाडजोडनि भाचीएका हरु लाई एक्सरे गरेर आउने गरेको र एक्सरे हेरेर उपचार गर्ने गरेको वताए ।
Previousसलाई खेलाउँदा आगलागी, एक महिने बालिकाको मृत्यु
Nextबसन्तको सफलता, कपाल काटेरै २८ लाखको घर !